चन्द्र ढकाललाई जिताउन सुरज र चण्डीराज ९ वर्षपछि एउटै ‘गुट’मा, चण्डी छाडे चन्द्र सर्वसम्मत – Clickmandu
पुष्प दुलाल २०७६ फागुन १४ गते १९:५४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ०६७ साल चैत २८ गते भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी आजाद श्रेष्ठलाई हराउँदै सुरज बैद्य निर्वाचित भए ।
महासंघको राजनीतिमा शक्तिशाली मानिने पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको समर्थनमा बैद्यले चुनाव जितेका थिए । आजाद श्रेष्ठलाई पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको समर्थन थियो ।
त्यो चुनाब चण्डीराज भर्सेस कुशकुमार थियो । जित चण्डीराजको भयो ।
सुरज बैद्य महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकै दिनदेखि चण्डीराजसँग सम्बन्ध बिग्रियो । चुनाव जितेको रात्रिभोजमा आफूलाई विशेष स्थान नदिएको भन्दै चण्डीले सुरजसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
त्यो बेला बैद्य र चण्डीबीच चण्डीलाई महासंघको विशिष्ट सदस्य बनाउने सहमति भएको थियो । जसकारण चण्डीले बैद्यलाई सहयोग गरेका थिए । र, चुनाब जिताएर देखाए पनि ।
बैद्य महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको केही दिनमै उनका पिताको निधन भयो । बैद्य काजकृयामा व्यस्त भए ।
बुबाको बरखी बारेर बसिरहेका बैद्यलाई प्रत्येक दिनजसो चण्डीराजले बिशिष्ट सदस्यको पत्र थमाउन दबाब दिइरहे ।
केही दिन त सुरजले सहे । तर, बुबाको काजक्रियामा बसेको किरियापुत्रीलाई चण्डीराजले भेटेर/फोन गरेर र आफ्ना मान्छे लगाएर विशिष्ट सदस्यको पत्र थमाउन दिएको दबाब सुरजलाई सह्य भएन । यो दबाब अमानवीय भएको सुरजले ठहर गरे ।
एकदिन चण्डीले सुरजलाई भोन गरेर भने- मलाई आजभोलि नै विशिष्ट सदस्यको चिठ्ठी चाहियो । होइन भने राम्रो हुँदैन ।’
चण्डीको त्यो धम्कीले सुरज रिसले चुर भए । र, भन्दिए, ‘तिमीलाई मेरो कार्यकालभरी पनि विशिष्ट सदस्यको चिठ्ठी दिन्न ।’
यो संवादसँगै चण्डी र सुरजको सम्बन्ध सकियो । यो घटना हो २०६८ बैशाखको ।
यो प्रकरणसँगै उनीहरु एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे । त्यसपछिका चुनावमा उनीहरुको खेमा बेग्लाबेग्लै भयो ।
संस्था निर्वाचित अध्यक्षले चलाउने हो पूर्वअध्यक्षले होइन भन्ने सुरजको सोच थियो । तर, चण्डीराजले आफू छायाँ अध्यक्ष भएर महासंघ चलाउन खोजेपछि सुरजले साथ छाडिदिए ।
उता चण्डी भने आफूले जिताएको मान्छेले आफूलाई नै नटेरेको, हेपेको भन्दै सुरजसँग रिसाए ।
त्यसपछि चण्डी आफू निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई भन्दा को आफ्नो ‘यस म्यान’ बन्न सक्छ तयसलाई सहयोग गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढे ।
किनभने अहिले चण्डीको कुनै व्यापार व्यवसाय छैन । उनी महासंघको राजनीतिलाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाएर मनग्ये आम्दानी गर्छन् भन्ने व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
यसअघि चण्डीराज ढकालले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छालाई समर्थन गरेका थिए ।
कुशकुमार जोशीले भने किशोर प्रधानलाई सहयोग समर्थन गरेका थिए ।
किशोरले हारे । शेखरले जिते ।
यसबेलासम्म शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा सबै चण्डीराजका मान्छे थिए । चण्डीराजकै निर्देशनमा र पशुपति मुरारकाको डिजाइनमा महासंघको विधान नै संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरियो । त्यसबेला भवानी बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिइन् ।
चण्डी गुटको यो निर्णयको मूख्य उदेश्य सुरज बैद्यका मान्छे भाष्करराज कँँणिकारलाई राेेक्नुु थियो, जसमा सफलता पनि मिल्यो । भाष्कर महासंघ छाडेर चेम्बरतिर होमिए ।
भवानी राणा अध्यक्ष भए पनि चण्डीराज हावी हुन थाले । विशिष्ट सदस्यमा मनोनित भएका चण्डीराजले महासंघको कार्यकारीणी बैठकमा सबैलाई निर्देशन दिन्थे ।
‘भवानी तिमी यसो गर, यति मात्रै बोला, पशुपति/शेखर…. यसो गर, यति मात्रै बोल’ भनेर आदेश दिन्थे ।
चण्डीराजको यो हर्कत निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका र बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई चित्त बुझेन । उनीहरु चण्डीसँग प्रतिवाद गर्न थाले । जुन कुरा चण्डीलाई पचेन ।
अनि चण्डीले शेखरलाई धम्क्याउन थाले- ‘विधान संशोधन गरेर तिमीलाई स्वत अध्यक्ष हुन दिन्न ।’
तर पशुपति मुरारका जुनसुकै हालतमा भएपनि शेखर गोल्छालाई स्वत: अध्यक्ष बनाउन लागि परे ।
महासंघको राजनीति चण्डीराज भर्सेज पशुपति मुरारका भइदियो ।
भवानी कहिले चण्डीको पक्षमा बोल्थिन् त कहिले पशुपतिको ।
चण्डीराज विधान संशोधन समितिका सभापति थिए । शेखर गोल्छालाई हटाउने उद्देश्यले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार भयो ।
अन्तिम समयमा आएर अध्यक्ष भवानी राणाले चण्डीलाई छाडिन् । शेखरलाई साथ दिइन् । जसकारण विधान संशोधन हुन सकेन । र, आगामी चैत २९ गतेदेखि शेखर स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन् ।
चण्डीराज हारे । पशुपतिले जिते । शेखरले न्याय पाए । भवानीले विधानको संरक्षण गरिन्, इतिहासमै लाग्ने ठूलो कलंकबाट बचिन् ।
विधान संशोधन असफल भएपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चण्डीले आक्रोश पोखे- ‘शेखर एक्लैले केही गर्न सक्दैन, पदाधिकारी र कार्यकारीणी सदस्यमा मेरो गुटको बहुमत ल्याउँछु । र, ६ महिनाभित्र शेखरलाई हटाउँछु ।’
चण्डीको यो अभिव्यक्तिप्रति शेखर गोल्छाले पनि बरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधानको उम्मेद्धारी घोषणासभामा बिराटनगर पुगेर आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘एकजना पूर्वअध्यक्षले पदाधीकारीमा आफ्नो बहुमत ल्याएर ६ महिनाभित्र शेखरलाई हटाउँछु भन्दै हिँडिरहनु भएको छ, त्यसैले म आफ्नो टिम बनाउनका लागि किशोर प्रधानलाई सहयोग गर्न बाध्य भएँ,’ शेखरले भने !
महासंघको आगामी निर्वाचनमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेद्धारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
किशोर प्रधानलाई पूर्वअध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, कुशकुमार जोशी, विनोदबहादुर श्रेष्ठ र अहिलेका बरिष्ठ उापध्यक्ष शेखर गोल्छाको समर्थन छ ।
उता चन्द्र ढकाललाई भने पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, सुरज बैद्य, प्रदिपजंग पाण्डे र अहिलेकी अध्यक्ष भवानी राणाको समर्थन छ ।
चन्द्र ढकालको उम्मेद्धारी घोषणासभामा चण्डीराज ढकाल, सुरज बैद्य, प्रदिपजंग पाण्डेका छोरा प्रवलजंग पाण्डे एउटै मञ्चमा देखिए । अध्यक्ष राणा भने उपस्थित भइनन् ।
एकले अर्कालाई सिध्यान लाग्ने चण्डीराज र सुरज बैद्य चन्द्र ढकाललाई जिताउन एउटै गुटमा उभिएका छन् । उनीहरुको यो मिलन ९ वर्षपछिको हो । चन्द्रले उनीहरुको टुटेको सम्बन्धलाई जोडिदिएका छन् ।
चण्डीराज छाडे चन्द्र ढकाल सर्बसम्मत बरिष्ठ उपाध्यक्ष
चुनावी माहोल तातेको छ । दुबै उम्मेद्धारहरु आफूले चुनाव जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि सर्वसहमतिको प्रयास पनि भइरहेको छ ।
चन्द्र ढकाल आफू सर्वसहमतिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन चाहन्छन् । तर, चन्द्र चण्डीराजको मान्छे भएको भन्दै पशुपति मुरारका र शेखर गोल्छाको समूह किशोर प्रधानलाई चुनाव जिताउन लागेका छन् ।
तर, पछिल्ला केही दिनमा महासंघको राजनीतिमा अर्को घटनाक्रमको विकास भएको छ । त्यो हो,– चन्द्रले चण्डीराजलाई छाडेको घोषणा गरेर मुरारका-गोल्छा गुटमा आउने हो भने उनलाई सर्वसहमत बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने ।
चुनाव जित्छु भन्दै हिँडेपनि किशोर प्रधानको अन्तरमनमा चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन । निकटस्थहरुसँथ प्रधान आफ्नो उचित व्यवस्थापन भए चन्द्रलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष छाडिदिन तयार भएको बताउने गरेका छन् ।
‘चन्द्रलाई सर्बसहमत बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर किशोरलाई जिल्ला नगर उपाध्यक्ष बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ महासंघको राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेका एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, त्यसका लागि चन्द्रजीले चण्डीलाई छोड्नुपर्छ । जुन कुरामा चन्द्रजी पनि सहमत भइसक्नु भएकोछ । केही दिनमा यस्ताे समीकरण हुने संभावना धेरै छ ।’
यसअघि पनि चन्द्र ढकाल एसोसिएट उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
‘अहिले सर्वसहमतिमा निर्वाचित हुनु भनेको भविष्यमा यो भन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने संभावनालाई प्रष्टसँग देखाउँछ,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज बैद्य भन्छन्,- ‘चन्द्रजीलाई जसरी हामीले निर्विरोध बनाउन सक्यौं भने यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय पनि हो ।’
बैद्यले आफ्नो पालामा ढकाललाई द्धिराष्ट्रिय संघबाट महासंघको कार्यकारीणी सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित गराएका थिए ।
कसरी भए निर्विरोध ?
ढकाललाई महासंघको नेतृत्वमा जानुपर्न भन्ने महत्वकांक्ष देखाउने व्यक्ति हुन् सुरज बैद्य । बैद्यले ढकालमा राम्रो संभावना देखे र निरन्तर प्रोत्साहन गरिरहे ।
सबैसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएका ढकाल पशुपति मुरारकाको कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थात् ७ महिना अघिदेखि एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा चुनाब लड्ने भन्दै प्रचार गर्न थालेका थिए ।
त्यसबेलासम्म पनि गोल्छा समूहले ढकाललाई सुरज बैद्यतिरको मान्छे भनेर पूर्णरुपमा विश्वास गरिसकेको थिएन । त्यसैले मुरारका र गोल्छा एसोसिएटतर्फको उापध्यक्षका लागि उर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानप्रति बढी झुकाब राख्थे ।
महासंघमा नेवार र माडवारी समुदायको बाहुल्यता छ । उनीहरु सकेसम्म बाहुन नेतृत्वमा पुगोस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यो फ्याक्टरले यहाँ पनि केही प्रभाव पारेको थियो । महासंघको इतिहासमा १७ अध्यक्षहरु मध्ये २र३ जनामात्रै बाहुन, २ जना माडवारी र बाँकी सबै नेवार समुदायका छन् ।
‘बाहुन समुदायबाट अध्यक्ष बनेका चण्डीराज ढकालको आजपनि महासंघमा बर्चस्व छ । त्यो देखेका माडवारी र नेवार समुदायको भित्रि मनमा भने चन्द्र नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने नभएको भने होइन,’ महासंघको वर्तमान कार्यसमितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।
पूर्वअध्यक्ष चण्डीले चन्द्रलाई खुलेआम सहयोग र समर्थन गरे । महासंघको राजनीतिक समिकरणमा चण्डीको निकै ठूलो भूमिका विगत र अहिलेको समिकरणले पुष्टि गर्छ ।
गोल्छा र मुरारका समूहको एकमात्र उद्देश्य शेखरलाई बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव जिताउनु हो ।
‘अवस्था यस्तो बनिदियो कि गोल्छा समूहले चन्द्रलाई लिएर अघि नबढे निर्वाचन जित्ने ढुक्क भएन,’ गोल्छा समूहलाई समर्थक गर्ने एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘त्यसैले हामीले उनलाई उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनायौं ।’
लामो अध्ययनपछि टिमले गरेको विश्लेषणलाई अर्का प्रत्यासी ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरे । र, उपाध्यक्षको दाबी छाडेर कोषध्यक्षमा चुनाव लड्न तयार भए ।
गोल्छा समूहले ज्ञानेन्द्र र चन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सफल भयो । तर, गोल्छा समूहकै सौरभ ज्योतिले एसोसिएट उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरे । समिकरण मिलिसकेको अवस्थामा ज्योतिको उम्मेद्वारी घोषणाले गोल्छा समूहको टाउको दुखायो ।
कतै गोल्छा समूह छाडेर ज्योति किशोर प्रधानको टिममा पो जान्छन् कि भन्ने चिन्ता भइरह्यो । तर, गोल्छा समूहले अन्तिम समयमा आएर ज्योतिको पनि व्यवस्थापन गर्यो ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार किशोर प्रधानले फागुन २२ गते बिराटनगर पुगेर उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला उनले आफ्नो र आफ्नो टिमबाट जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थिए । र, चन्द्र ढकाल आफ्नो टिमबाट एसोसिएटको उपाध्यक्ष हुनसक्ने प्रचार गरे ।
प्रधानको त्यस्तो प्रचारले गोल्छा समूहलाई चन्द्रलाई नछाड्न झन दबाब पर्यो । र, अन्तिममा फागुन २७ गते गोल्छा समूहले चन्द्रलाई एसोसिएट उापध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने निधो गर्यो ।
ढकाललाई दुबै समूहले आफ्नो दाबी गरेपछि अब सुरु भयो उनलाई निर्विरोध बनाउने राजनीति । ढकाललाई निर्विरोध बनाउन शेखर गोल्छा समूह र किशोर प्रधान समूह दुबै लाग्यो । गोल्छा समूहका समर्थक चण्डीराज, पशुपतिहरु पनि लागे भने प्रधान समूहका समर्थक सुरज बैद्य, कुशकुमार जोशीहरु पनि ।
कसरी दुबैको नजरमा परे ?
स्वभावका हिसाबले ढकालको सबैसँग अच्छा सम्बन्ध राख्ने क्षमता छ । यही स्वभावले उनलाई सबैले आफ्नो सम्झिए ।
उनी नम्र बएर बोल्छन् । कसैलाई बिझाउँदैनन् । विवादमा आउनै चाहँदैनन् । सम्बन्ध स्थापित गर्न उनी निकै माहिर छन् ।
व्यवसायिक वृत्तमा मात्रै होइन, त्यो भन्दा माथि उठेर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पनि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । मिडिया र पत्रकारहरुसँगको सम्बन्ध पनि उस्तै राम्रो छ । जसले सबैतिर उनको चर्चा भएको छ ।
‘चर्चित र लोकप्रिय मान्छेलाई सबैले आफ्नो बनाउन चाहन्छन्,’ एक व्यवसायीले भने ‘त्यतिमात्रै होइन, त्यस्ता व्यक्तिसँग चुनाब लड्ने हिम्मत पनि जो कोहीले गर्न नसक्ने रहेछन् ।’
रेमिटेन्स, वैंकिङ, इन्स्युरेन्स, पर्यटन, पूर्वाधार, जलविधुत, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, कार्गोल, डिस होम, केबलकारगायतमा उनको लगानी छ ।
ढकाल अध्यक्ष रहेको आईएमईललाई सरकारले २ पटक महत्वपूर्ण व्यावसायीक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसैगरी, रेमिटेन्स कम्पनीहरु मध्ये सवैभन्दा बढी कर भुक्तान गरे वापत आईएमई लगातार तीन पटकसम्म ठूला करदाताको रुपमा सम्मान पाइसेका छन् । नेपाल भित्रिने कूल रेमिट्यान्समध्ये २५ प्रतिशत आइएमइमार्फत भित्रिने गरेको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट पटक-पटक विभूषित भएका ढकाल नेपाल इन्डोनेसिया च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका अध्यक्ष तथा नेपाल जर्मन च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनी नेपाल मलेसिया चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।
त्यस्तै, ढकाल लगानी बोर्डका आमन्त्रित सदस्य र नेपालका लागि इन्डोनेसियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत समेत हुन् ।
आफ्नो पक्षमा थप माहोल सिर्जना गर्नसके आगामी चैत २९ गतेदेखि ढकालको बायोडाटामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसपछि अध्यक्ष पनि थपिने संभावना देखिन्छ । अहिलेको बिधान अनुसार बरिस्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि उनले अन्तिम रणनीतिक अस्त्रको उचिप प्रयोग गर्न भने सक्नुपर्छ ।
चन्द्रका सबल र दुर्वल पक्ष
चन्द्र ढकालका बिराेधीहरु उनीसँग निर्णय क्षमता नभएको र सरकारको निर्देशनमा महासंघ चलाउने भएकोले उनलाई जिताउन नहुने बताउँछन् । तर, उनका समर्थकहरु चन्द्रकाे यही सबल पक्ष भएको बताउँछन् । सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर उनले महासंघका कामहरु गराउन सक्ने भएकाले चन्द्रलाई जितनउनु पर्ने तर्क गर्छन् ।